Yaada – Page 101 – Bilisummaa
Labsa Dhaaba Dimokiratawaa Oromoo/ODF
Maaliif kan dabre irraa hin baranne? (Kutaa lammaffaa)
Maaliif kan dabre irraa hin baranne? (Kutaa lammaffaa) Kutaa lammaffaa Mata duree kana jalatti isa kutaa duraa keessatti qabsaa’ota fi jaarmayoota siyaasaa Oromoo kan walaba ta’anii …
Maaliif kan dabre irraa hin baranne?
March 20, 2013	3
Kutaa duraa Gaafiin asitti dhiyaate kun gaafii walii galaa ti. Gadifageenyaan yoo ilaalle gaafilee gara garaa of keessaa qabaachuu danda’a. Fakkeenyaaf Maaliif balleessa dabre …
Hadhaa Qabsoon qabdu dhamdhamuu dadhabuudhaan, qabsoo keessaa of moggeessuun amaluma qabsoo ti.
Qabsoo nama eddu taatee wajjin jalqabuu fi waadaa ykn hirbuu tokko wajjin yeroo seentu, hunduu wal bira dhaabata. Garuu qabsoo hirbuu seenteef xumuruuf hunduu akka …